Global Voices teny Malagasy » Mpiaro Ny Zon’Olombelona Saodiana Niatrika Ny Haratsian’ny Mpanao Fanadihadiana Sy Ny Mpitsara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Aogositra 2013 4:20 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Natao tany Buraidah, Arabia Saodita ny andiany faha-telo tamin'ny fitsarana an'i Umar Al-Saeed omaly [18 Aogositra] . Umar Al-Saeed , mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika  (ACPRA) dia notanana am-ponja tamin'ny 28 Aprily fa nandà tsy hanatrika ny fakàna am-bavany tsy misy mpisolovava.
Nanontany an'i Al-Saeed, mpikambana tanora indrindra voasambotra tao amin'ny ACPRA, ny mpitsara momba ny iray amin'ireo fiampangana, ny “Fitsikerana ny lalàna”; nanandrana ny niresaka tamin'ireo mpisolovava azy i Umar Al-Saeed. “Nahoana ianao no mila ny fanampian'ireo mpisolovava anao amin'ny valim-panontaniana ? Tsy lehilahy ve ianao ?” Hoy ny fanontaninan'y mpitsara mandrahona.  Tsy nety namaly i Umar avy eo fa nitaky ny fampitsaharana ireo fanambaniana. Efa nitarainany ny fanambaniana  nataon'ny mpanao fanadihadiana teo aloha.
Nandritra ny fitsaràna dia nisy mpanatrika iray, Mohammad Al-Rabiah [@mohad_f ], niteny tamin'ny mpitsara fa tsy ara-dalàna ny tsy fahazahoan'ny voampanga sy ny mpiaro azy tsy hiresaka. Nantsoin'ny mpitsara hipetraka eny akaikiny i Al-Rabiah ary natolony azy ny bokin-dalàna momba ny heloka bevava, ka nasainy notondroiny ny andiany izay manakana ny mpitsara tsy hanao izany.
Tsy nahazo alàlana hanatrika ny fitsaràna i Bayan Al-Bjadi [@Urooobh_ ] sy i Jinan Al-Ghaith [@JMNG6 ]. Nolazain'ny mpitandro filaminana fa tsy tian'ny mpitsara hiditra ao ny vehivavy ary dia nasainy nody izy ireo. Tsy nety nody anefa izy ireo fa niandry teo ivelany teo mandra-pahavitan'ny fitsaràna.
Tsy voalohany izao  no nandraràn'ny mpitsara ny vehivavy tsy hanatrika fitsaràna. Lazain'ny mpibitsika sasany fa efa mahazatra izany fanavakavahan'ny rafi-pitsarana ny vehivavy izany :
Araka ny filazan'ireo mpanatrika ny fitsarana ,  dia nasain'ny mpitsara nangataka ny fanoloana azy izy fa tsy te-hanohy intsony ity raharaha ity. Tena sorena izy ka tsy nametraka daty hanaovana ny andiany manaraka. Tsy nisy firaketana an-tsoratra nosoniavin'ny voampanga sy ireo mpisolovava.
Mpikambana enina ao amin'ny fikambanan'ny zon'ny olon-tsotra sy mpanao politika no mbola any am-ponja any Arabia Saodita. Isan'izany Mohammad Al-Bjadi , izay efa navotsotra tamin'ny 6 Aogositra ary nosamborina indray noho ny antony tsy mazava ny 14 Aogositra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/08/28/50997/
 ireo mpanavao ny rafi-pitsarana any Arabia Saodita: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/reformists-on-trial-in-saudi-arabia/
 Fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny olon-tsotra sy ny mpanao politika: http://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Civil_and_Political_Rights_Association
 notanana am-ponja : https://globalvoicesonline.org/2013/05/02/saudi-authorities-continue-crackdown-on-human-rights-activists/
 Nasiana rojo vy (menotte) i Umar Al-Saeed tamin'ny andiany faharoa. : https://globalvoicesonline.org/2013/07/19/saudi-women-banned-from-attending-public-trials/
 Hoy ny fanontaninan'y mpitsara mandrahona.: https://twitter.com/yasser939393/status/369036976436965376
 Efa nitarainany ny fanambaniana: http://twitmail.com/email/255456987/62/البيان-الأول-عن-المحاكمة-السياسية-لعضو-جمعية-حسم--عمر-السعيد-
 Tsy voalohany izao: https://globalvoicesonline.org/2013/05/04/saudi-activist-refuses-trial-i-will-not-tolerate-women-degradation/
 Araka ny filazan'ireo mpanatrika ny fitsarana: https://twitter.com/mohad_f/status/369041330384535553
 izay efa navotsotra tamin'ny 6 Aogositra : https://globalvoicesonline.org/2013/08/06/saudi-activist-released-after-two-years-in-prison/